Nezvedu - Yantai Jietong Water Treatment Technology Co, Ltd.
Yantai Jietong Mvura Kurapa Technology Co, Ltd.nyanzvi mumaindasitiri kurapwa mvura, yegungwa desalination, electrolysis chlorine maitiro, uye tsvina kurapwa chirimwa, iri yepamusorosoro zvebhizimisi nyanzvi kuti mvura kurapwa chirimwa Consulting, tsvakurudzo, budiriro, kugadzirwa uye okutengesa. Isu takawana zvinopfuura makumi maviri zvigadzirwa uye patent, uye takawana kubvumidzwa kwemhando yepamusoro manejimendi system standard ISO9001-2015, kwezvakatipoteredza manejimendi system standard ISO14001-2015 uye yepamabasa hutano uye chengetedzo manejimendi system standard OHSAS18001-2007.
Isu tinoteerera kune chinangwa che "Sayenzi neTekinoroji segwara, Hupenyu hwekupona, Chikwereti cheBudiriro", takagadzira gumi nemana akateedzana emhando makumi mapfumbamwe emhando yezvigadzirwa zvekuchenesa mvura, mamwe acho anosarudzwa sezvakagadzirwa naPetroChina, SINOPEC neCAMC. isu takapa hukuru-hukuru electrolysis system yekudzivirira ngura yemvura yegungwa yemagetsi magetsi muCuba neOman, uye yakapa yakakwira Mvura yakachena kubva kumvura yegungwa yeOman, iyo yaive yawana kukwirira kwakakwirira kubva kune vatengi vedu nemakwikwi mutengo uye mhando.Mapurojekiti edu ekurapa mvura akatumirwa kune vese pasirese, seKorea, Iraq, Saudi Arabia, Kazakhstan, Nigeria, Chad, Suriname, Ukraine, India, Eritrea nedzimwe nyika.
Kambani Inovandudza Nhoroondo
Technical department Dhizaini Kugona
Kubva 2011, kambani yakaparura zvizere iyo Sliodworks software 3D dijitari dhizaini chikuva. SOLIDWORKS's intuitive 3D dhizaini uye zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogadzirisa zvinogona kubata, kugadzira, kuongorora, kutaurirana uye kugadzirisa mazano matsva, uye nekushandura mazano matsva muzvinhu zvakagadzirwa zvigadzirwa. Pamberi pekugadzirwa kwechigadzirwa, nekuyedza zvigadzirwa mune rakapotsa nyika, mainjiniya anogona kunyatso kuongorora mashandiro, kunatsiridza mhando, uye kumhanyisa chigadzirwa utsanzi.
Kuburikidza neiyo 3D modhi, kutaurirana zvirinani nevatengi vechigadzirwa, nekukurumidza kupindura kune zvinodiwa nevatengi, uye kuchinjana chigadzirwa mazano uye dhizaini nemutengi. Tora kushandisa 3D dhizaini dhizaini kutengesa zvigadzirwa zvitsva nerubatsiro rwechokwadi kupa uye kunyudza AR neVR zvemukati, 3D chigadzirwa data inopihwa kuverengera kugadzirwa kwakaringana kwekuongorora magwaro, emhando yepamusoro mushandisi mirairidzi uye zvinyorwa zvemusangano. Iri rakanakisa dhizaini dhizaini rinotarisana nekupa mhinduro dzese dzevashandisi vekurapa mvura pasi rese.
Ro Zvakanaka Mvura Kuchenesa Sefa, Ro Desalination Maitiro, Ro Mvura Sefa Spare Zvikamu, Nyanzvi Yemvura Yekuchenesa System, Mvura Yegungwa Kumvura Yekunwa Machine, Sodium Hypochlorite System Dhizaini,